Esi lelee okwuntughe nke netwọọdụ wifi na gam akporo | Site na Linux
Esi lelee okwuntughe nke netwọọdụ Wi-Fi na gam akporo
Nke a bụ oge nke atọ m natara ozi email na-arịọ anyị ka anyị kesaa usoro aghụghọ android ike lee okwuntughe nke netwọọdụ wifi na gam akporo Ọ bụ ezie na azaghachiri m onye nke ọ bụla na usoro m na-eji, echere m na ọ bụ oge dị mma iji were nkuzi dị mfe banyere etu esi eme obere usoro a dị mkpa.
1 Chọrọ ịhụ paswọọdụ nke netwọk Wi-Fi na gam akporo
2 Usoro iji hụ paswọọdụ nke netwọk Wi-Fi na gam akporo
Chọrọ ịhụ paswọọdụ nke netwọk Wi-Fi na gam akporo
Iji hụ paswọọdụ nke wifi network na gam akporo anyị ga-enwe ikikere mgbọrọgwụ (mụta ebe a gbue gam akporo), na ngwaọrụ anyị, ọ dịkwa mma ịnweta ihe njikwa faili arụnyere dị ka Njikwa Ihe Njikwa ES na onye editọ akwụkwọ ọ bụla. Usoro a kwesịrị ịrụ ọrụ na ngwaọrụ ọ bụla na ụdị ọ bụla nke gam akporo nke na-ezute ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha na mbụ.
Usoro iji hụ paswọọdụ nke netwọk Wi-Fi na gam akporo
Enwere ụzọ abụọ iji hụ paswọọdụ nke wifi network na gam akporoNke mbu bu site na ngwa aputara maka ya na nke abuo bu site na ilele okwuntughe na faili nhazi Wi-Fi nke ihe nile gam akporo nwere.
Onwe ya rEkwadoro m ka ị wụnye ngwa ọ bụla iji hụ paswọọdụ nke netwọk wifi na gam akporo, ma ka anyi mee usoro omenala nke m na-akọwa n'okpuru:
Site na gam akporo anyị nwere mgbọrọgwụ ikike ma jiri njikwa faili ọ bụla anyị nọ na ndekọ ahụ /data/misc/wifi,, n'ime ya ị ga-ahụ faịlụ a na-akpọ wpa_supplicant.conf O nwere ozi nke netwọk Wi-Fi niile ị jikọtara, gụnyere paswọọdụ ha. Lelee faịlụ ahụ na nchịkọta akụkọ ọ bụla ma chọta netwọk nke ịchọrọ ịmata paswọọdụ, ssid na-anọchi anya aha netwọk na psk paswọọdụ nke ya.
Otherzọ ọzọ dị mfe ma echere m na ọ dịghị mkpa bụ na ị wụnye ngwa dịka WiFi Paswọdu, Iweghachite WiFi, Iweghachite WiFi Paswọdu Pro n'etiti ndị ọzọ, ngwa ndị a ga-ajụ gị maka ịnweta mgbọrọgwụ ma depụta netwọkụ echekwara yana okwuntughe ha.
Ọtụtụ n'ime ndị na - agụ akwụkwọ anyị maara obere usoro a, mana enwere m olileanya na ọ ga - aba oke uru maka ndị ọrụ ahụ nwere mkpa ịlele okwuntughe Wi-Fi echekwara na ngwaọrụ ha. Ndabere nke usoro a bụ mkpa maka ịnweta mgbọrọgwụ (Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe m na-akwado ka anyị niile nwee, oge ụfọdụ ọ gaghị ekwe omume), Amaghị m ma ọ bụrụ na enwere ụzọ ọ bụla iji hụ igodo na-enweghị nnweta mgbọrọgwụ, yabụ enwere m ekele ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara ụzọ ọ bụla, hapụ ya na nkwupụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Esi lelee okwuntughe nke netwọọdụ Wi-Fi na gam akporo
Daalụ nke ọma, agbanyeghị na enweghị m ohere mgbọrọgwụ, (mana) ọ na-amasịkarị m ịmara usoro ma ọ bụ ndụmọdụ maka isiokwu a.
Daalụ! Ọ dị mma mgbe niile ịmara ka esi ama ngafe.
I nwekwara ike wụnye Wifikeyshare (Jiri mgbọrọgwụ) site na Fdroid dị ka GUI ọzọ na ọ na-enyekwa anyị ohere igbanye koodu QR ịkekọrịta njikọ Wi-Fi yana ọbụlagodi na nkwado NFC
Ndụmọdụ: ikekwe ihe ọtụtụ chọrọ ịmata bụ ka esi ahụ paswọọdụ maka Wi-Fi nke ha na-echekwaghị na ngwaọrụ ha ... Wi-Fi ndị ahụ ha chọpụtara gburugburu ha mana ha enweghị ike iji ya maka na ọ jụrụ ha paswọọdụ ha na-amaghị.
Zaghachi A. Vázquez
Kedu ihe na-ezu ohi wifi onye agbata obi gị, nri?
Are maghị ma ọ bụ obere ...
You ma ma ọ bụrụ na enwere ike ịme ya site na iPhone na-enweghị ngwaọrụ ahụ? Daalụ!
Obinna 3 dijo
Anaghị m enweta okwuntughe echekwara, n'eziokwu ma ọ bụ netwọk, naanị ederede m ghọtara dịka nhazi na ihe ọ bụla.
Ọ bụ MotoG1, gbanyere mkpọrọgwụ doro anya, na Fdroid's Amaze nchọgharị.